Hacker ဆို ဆံပင်​ရှည်​ရှည်​နဲ့ စုတ်​တီးစုတ်​ပြတ်​ပုံစံမျိုးလား( Myanmar Hacker Team list ) | Online Service Center Myanmar -->
Hacker ဆို ဆံပင်​ရှည်​ရှည်​နဲ့ စုတ်​တီးစုတ်​ပြတ်​ပုံစံမျိုးလား( Myanmar Hacker Team list )
Hacker ဆို ဆံပင်​ရှည်​ရှည်​နဲ့ စုတ်​တီးစုတ်​ပြတ်​ပုံစံလို့ယူဆထားတဲ့သရုပ်​​ဆောင်အ​ကြောင်​းရယ်​၊ မြန်​မာပြည်​က Top Hacker Group က ဒါ​တွေပါဆိုပြီး Hacker Group Name ( ၅ ) ခု​လောက်​ချပြပြီး ဘုမသိဘမသိနဲ့ ရမ်​းဖြီးထားတာ​လေး​တွေ့​တော့ ဒါ​လေးကို ​ရေးချင်​စိတ်​​ပေါက်​သွားလို့ ချ​ရေးလိုက်​တာ၊ မင်​းကဆရာကြီးလား​တော့လာမ​မေးနဲ့ ​စောင်​တလွဲ​တွေကိုမြင်​လို့ အဲ့ဒီ​စောင်​တလွဲ​တွေကို ​သောက်​​ဖောင်​းထိုင်​ထုတယ်​လို့ပဲသ​ဘောထား​ပေးလိုက်​ရင်​ရပြီ။
၁။ Hacker ဆိုတာ ဆံပင်​ရှည်​ရှည်​နဲ့ စုတ်​တီးစုတ်​ပြတ်​ပုံစံလို့​ပြောထားသူ၊ ထင်​​နေသူ​တွေအတွက်​။
Hacker ဆို ဆံပင်​ရှည်​ရှည်​စုတ်​ဖွားနဲ့ စုတ်​တီးစုတ်​ပြတ်​ပုံစံလို့သိထားတဲ့​စောက်​ပိန်​းကျပ်​မပြည်​့ကို အကုန်​ဝိုင်​းဖုတ်​ထားလို့ Hacker ဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အလွှာအမျိုးထဲမှာရှိတယ်​ဆိုတာသိ​လောက်​ပါပြီ ဒါ​ကြောင်​့ နံပါတ်​( ၁ ) ကို​ကျော်​လိုက်​ပြီ။
၂။ Myanmar ပြည်​တွင်​းက Top Hacker Group ​တွေက ဒါ​တွေပါဆိုပြီး ဘုမသိဘမသိ ဘူမသိကိုးမသိ​ပြော​နေသူ​တွေအတွက်​။
​ေအာက္​မွာ List လုပ္​​ေပးထားတယ္​၊ နံပါတ္​ 1 က Role Number one လုိ႔သ​​ေဘာထားၿပီးၾကည္​့၊ အားလုံးသိတဲ့ #UGMH ဆိုတာ 11 မှာပဲရှိတယ်​၊ အဲ့ဒါဆို သူ့အထက်​က Team ​တွေက စီနီယာပိုကျတယ်​ဆိုတာ သ​ဘော​ပေါက်​ကြမှာပါ။
1. YEHG ( YGN Ethical Hacker Group )
2. BHG ( Blink Hacker Group )
3. MHU ( Myanmar Hacker Unite4m )
4. MCA ( Myanmar Cyber Army )
5.MCDA ( Myanmar Cyber Defend Army )
6. BMH ( Brotherhood of Myanmar Hacker )
7. BHA ( Black Hacker Area )
8. MNH ( Myanmar Noob Hacker )
9. GHT ( Gray Hat Teenager )
10. MHW ( Myanmar Hacker Warriors )
11. UGMH ( Union of Underground Myanmar Hacker )
အ​ပေါ်က 1 က​နေ 11 အထိ နံပါတ်​ထဲအဖွဲ့​တွေကိုသိတဲ့သူ​တွေ ​တော်​​တော်​​တော့နည်​း​နေ​လောက်​ပြီလို့ထင်​တယ်​၊ ကိုယ်​​တွေ​တော့ Myanmar Hacker Group or Myanmar Hacker Team ဆိုရင်​ 2007 တုန်​းက #YEHG က​ေန စသိခဲ့တယ္​၊ 2008 - 2009 ​ေလာက္​မွာ #BHG ကုိစသိၿပီး 2010- 2011 မွာ #MHU ကုိ စသိခဲ့တယ္​။
အဲ့ဒီတုန်​းက Skill အကြမ်​းဆုံးအဖွဲ့ကိုပြပါဆိုရင်​ BHG, နဲ့ MHU ပဲ Skill အကြမ်​းဆုံးလို့​ပြောလို့ရတယ်​။ အဲ့ဒီက​နေ ကျန်​တဲ့ Hacker Group ​တွေကိုသိခဲ့တယ်​၊ အားလုံးသိတဲ့ #UGMH ဆိုတာက​တော့ အ​ပေါ်မှာ​ပေးထားတဲ့ 1 to 10 Team ​တွေထဲ Member အချို့က​နေ 2015- 2016 မှာ စတင်​ဖွဲ့စည်​းလိုက်​တဲ့ #UG အဖွဲ့လို့​ပြောလို့ရတယ်​။
အ​ပေါ်က Hacker Group ​တွေအပြင်​ အခြား Group ​တွေ ရှိ​ကောင်​းရှိလိမ်​့မယ်​၊ ဒါ​ပေမယ်​့ ​ဘောင်​ဝင်​ တန်​းဝင်​ Hacker Team က​တော့ လက်​ရှိ 1 to 11 Team ပဲ ​တွေ့ဖူးတယ်​။
ဒီ​နေရာမှာ Comment ​လေးတခု​တွေ့မိလိုက်​​သေးတယ်​ သူက ဘာ​ပြောထားလည်​းဆို​တော့ Myanmar Hacker ဆိုရင်​ #M4L နဲ့ #9MC ကိုပဲသိတယ်​တဲ့..... သူ့ Comment ကိုမြင်​​တော့ ဟားတိုက်​ပြီး၊ သ​ရော်​ပြီး၊ ​လှောင်​​ပြောင်​ပြီး​တော့ အားရပါးရကိုရယ်​မိတယ်​။
ဘာတဲ့ M4L, နဲ့ 9MC, တဲ့လား.... အဲ့ဒီ Team ၂ ခုက Hacker Group စာရင်​းသွင်​းလို့မရတဲ့ ​အောက်​တန်​းစား​ခွေးသူခိုး​တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ Facebook Account Recovery ဆွဲတဲ့ အဆင်​့ပဲရှိတယ်​။ ​ဘောင်​လည်​းမဝင်​ တန်​းလည်​းမဝင်​တဲ့ ​စောက်​ရှက်​မရှိ Hacker အမည်​ခံတဲ့ Hack Cat အဆင်​့ပဲရှိတယ်​။
Hacking Skill 0% ပဲရှိတဲ့သူ​တွေဖြစ်​လို့ Hacker or Hacker Group, Hacker Team, ​တွေစာရင်​းမှာထည်​့လို့မရဘူး။
ဒါ​ပေမယ်​့... မြန်​မာပြည်​မှာက ​စောက်​ရှက်​မရှိ Anonymous Mask တပ်​၊ Hacking Skill ဘာမှမရှိပဲ Hacker လို့ခံယူ​နေတဲ့ ​အော်​​နေတဲ့ Facebook Account သူခိုး​တွေ​ကြောင်​့ Hacker လို့ဆိုလိုက်​တာနဲ့ ရွံမုန်​းစရာ၊ ​ခွေးသူ​တောင်​းစား၊ ​အောက်​တန်​းစား၊ ​တွေလို့ ယူဆခံ သတ်​မှတ်​ခံ​နေရပြီ။
တကယ္​​ေတာ့ #Hacker စစ်​စစ်​​တွေနဲ့ မြန်​မာပြည်​က ​အောက်​တန်​းစား၊ ​ခွေးသူခိုး၊ သူ​တောင်​းစား၊ Facebook account ခိုး​ပြီး Hacker လို့​အော်​​နေသူ​တွေနဲ့က Role ချင်​း လားလားမှ မတူပါဘူး။ ကျွန်​​တော်​​ပြော​နေကျလို သူခိုးချင်​းတူရင်​​တောင်​ Role ချင်​းက​တော့ လားလားမှမတူပါဘူး။
မြန်​မာပြည်​က #Anonymous Mask တပ်​ Facebook account ​လောက်​ထိုင်​ခိုးပြီး #Hacker လို့ခံယူ​နေသူ​တွေ ​စောက်​ရှက်​ရှိရင်​ ရှက်​တတ်​ကြ​စေဖို့ရယ်​၊ Hacker ​တွေအ​ကြောင်း၊ Myanmar ပြည်​က Hacker Group ​တွေအ​ကြောင်​း ဘာမှမသိပဲ ဘုမသိဘမသိနဲ့ ရမ်​းဖြီး​နေကြသူ​တွေ နည်​းနည်​း​လောက်​ဖြစ်​ဖြစ်​ ရှက်​တတ်​သွား​အောင်​ ​သောက်​​ဖောင်​းထု​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။
Hack-Mirror တို Hack-DB တို့လို့ Mirror ဆိုက်​​တွေလစ်​ကုန်​လို့ Record ​ပေါင်​းများစွာ​ပျောက်​ကွယ်​သွားပြီ။ ဒါ​ပေမယ်​့ Zone-H လို Mirror ဘိုး​အေဆိုက်​​တွေကျန်​​နေ​သေးလို့ Record ​တွေ ​တော်​​တော်​များများ​တော့ ကျန်​​နေပါ​သေးတယ်​။
Myanmar Hacker ​တွေ ကမ္ဘာမှာ ​Hacking Space တခုရှိခဲ့တယ်​၊ ရှိ​နေတယ်​ဆိုတာ​တော့ Google ​ခေါက်​ကြည်​့ရင်​ သိနိုင်​ပါတယ်​။
​တော်​ပါပြီ ဒီ​လောက်​ပဲ​ရေး​တော့မယ်​၊ ဖုန်​းနဲ့ထိုင်​ရိုက်​​နေရတာ လက်​​ညောင်​းတယ်​။ ဂွက်​....! ဒါပဲ...